बिरवलको अग्नि परिक्षा - E Net Nepal
Home Akabar-Birbal Story बिरवलको अग्नि परिक्षा
बिरवलको अग्नि परिक्षा
E NET NEPAL 10:00 PM Akabar-Birbal Story,
एकपल्ट बिरवल बिरामी परेका थिए | बिमारीले उनि तिन दिनसम्म थलिएपछि चौथो दिन बादशाह आफै बिरवललाई भेट्नका निमित्त उनकै घरमा गए । संयोगबस त्यसदिन बिरवलको तबियत केहि बेस थियो । बादशाह धेरै बेरसम्म उहीं बसेर उनीसंग कुराकानी गर्दै बसे यत्तिकैमा बिरवललाई दिसा लागेकोले उनि चर्पी गए ।
यता बादशाहलाई भने नयाँ तरिकाले बिरबलको बुद्धि परीक्षा लिने विचार सुझ्यो । बिरामीले बिरवल को प्रतिभाशाली दिमागलाई बोधो त परेको छैन ! भन्ने सोचेर उनले एउटा नोकरलाई बोलाएर बिरवल सुत्ने खाटको चारै खुट्टामुनि एकएकओटा कागजको टुक्रा राख्न लगाए र बिरवललाई यो कुरा नभन्नु भनि आदेश गरे पनि । केहि बेरपछि बिरवल चर्पीबाट आए र हातपाउ धोएर कोठामा गइ खाटमा सुते बादशाहका साथ कुराकानीको सिलसिला पुन: सुचारु भयो । बिरवल कुराकानी त गरिरहेका थिए, तर उनको ध्यान भने तलमाथि गरि कुनै चिज खोजीरहे जस्तो लाग्थ्यो । उनि कहिले मास्तिर, कहिले तलतिर बडो ध्यानसित हेर्ने गर्थे ।
उनले त्यसरी बारम्बार तलमाथि हेरेको देखेर "बिरवल ! तिमि के तज्बिजिरहेका छौ ?" भनेर बादशाहले सोधे । तब बिरवलले "केहि गोलमाल भए झैँ लागिरहेको छ" भनि बिन्ति चढाए । तब बादशाहले "कस्तो गोलमाल भए झैँ भैरहेको छ बिरवल?" भनि सोधे । बिरवलले उत्तर दिए : "यो मेरो खाट एउटा कागज जति उठेको हो, वा त्यो छत नै एउटा कागज जति तल तिर धसेको हो, यी दुइवटा कुरा मध्ये एउटा त पक्कै भएको छ ।" भनि बिन्ति गरे । तब फेरी बादशाहले भने "अरे बिरवल ! तिमि यी सब पागल कुरा किन गरिरहेका छौ ? के बिमारीले तिम्रो मगजमा केहि खराबी त आएको छैन ?" अनि बिरवलले भने "पागल कुरा म गरिरहेको छैन । न त बिमारीले मेरो मगज नै खराब भएको छ । म जो भनिरहेको छु सब ठिक भनिरहेको छु ।"
अनि त बादशाहले सबै कुरा बिरवललाई बेलिबिस्तार लगाए र उनको बुद्धिको प्रशंसा गर्दै आफ्नो दरबारमा गए |
By E NET NEPAL at 10:00 PM